ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၏ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခြင်း (4-12-2021) COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အခြေအနေ (6-12-2021, 4:00 PM) COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အခြေအနေ (6-12-2021, 8:00 PM) COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အခြေအနေ (7-12-2021, 4:00 PM)
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အခြေအနေ (7-12-2021, 4:00 PM)
07 Dec 2021 News
(၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း တွေ့ရှိရသော COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၂၃၁) ဦး၏ မြို့နယ်အလိုက် တွေ့ရှိရမှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အခြေအနေ (6-12-2021, 8:00 PM)
06 Dec 2021 News
(၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း (၁၆,၈၈၄) ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၂၃၁) ဦးတွေ့ရှိရပါသည်။
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အခြေအနေ (6-12-2021, 4:00 PM)
(၄-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၅-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း တွေ့ရှိရသော COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၂၈၅) ဦး၏ မြို့နယ်အလိုက် တွေ့ရှိရမှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၏ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခြင်း (4-12-2021)
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းသည် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကျော်ရွှေ၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသီတာလှ (ဆေးရုံအုပ်ကြီး/ကုသရေး)နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍
"အိုမီခရွန် (omicron) အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ မျိုးဗီဇပြောင်း ရောဂါပိုးများကိုသတိပြုကာ မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ” ဗွီနိုင်း/ပိုစတာ (5-12-2021)
05 Dec 2021 Announcements
"ကိုဗစ်-၁၉ ရပ်တန့်ဖို့ ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို အားလုံးဆက်လက်လိုက်နာလို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့"
03 Dec 2021 Announcements
မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာမည့် ခရီးသွားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မလာရောက်မီ လွန်ခဲ့သော (၁၄) ရက်ကျော်က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲတို့မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး (၇)မျိုးအား ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့် ထိုးနှံပြီးကြောင်း ကာကွယ်ဆေးထိုး အထောက်အထားလက်မှတ် ပြသနိုင်သူများအားQuarantine ကာလ (၇) ရက် ထားရှိဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း
Announcement of precautionary measures for travelers (30-11-2021)
30 Nov 2021 Announcements
Announcement of precautionary measures for travelers from the Republic of Botswana and the Republic of South Africa affected with Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern to prevent the spread of the new SARS-CoV-2 variant (30-11-2021)
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နေအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး (Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်အကျုံးဝင်သည့် မြို့နယ်များစာရင်း (24-11-2021)
24 Nov 2021 Announcements
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နေအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး(Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်အကျုံးဝင်သည့် မြို့နယ်များစာရင်း (၂၄-၁၁-၂၀၂၁)
Myanmar COVID-19 Surveillance Dashboard
ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ စုစုပေါင်း 0
ပိုးတွေ့ ပြန်လည်သက်သာ 0
စောင့်ကြည့်လူနာ စုစုပေါင်း 0
ပိုးတွေ့ သေဆုံးလူနာ 0
Last Update on 7-4-2020 8:00 PM
The documents appearing under the A-Z index are meant only for use inside the Ministry of Health and registered general practitioners of Myanmar.
ရေလွှမ်းမိုးသောဒေသများရှိ ပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးသတိပေးနှိုးဆော်ချက် (ဩဂုတ်၊ ၂၀၁၉)
ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ (ဇွန်၊ ၂၀၁၉)
ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Version 2.1) (2-7-2019)
အပူဒဏ်အန္တရာယ် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (၂၀၁၉ ခုနှစ်)
Heat Disorders SOP (2016)
သင်္ကြန်ကာလ အပူဒဏ်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အန္တရာယ်
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး Billboard Poster (May 2019)
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ လက်ကမ်းစာစောင်နှင့် ပိုစတာများ
Schistosomiasis ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ရေချိုခရုမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော သန်ပြားကောင်ရောဂါ (Schistosomiasis)
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါ အသိပညာပေး Viber Sticker Package
အပျိုဖော်ဝင်လာမယ့် မိန်းကလေးများအတွက် သိမှတ်ဖွယ် (ရာသီသွေးပေါ်ခြင်းအကြောင်း လေ့လာကြစို့)
မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါ ကုသကာကွယ်ရေး လက်ကမ်းစာစောင်များ
အပျိုဖော်ဝင်လာမယ့် မိန်းကလေးများအတွက် သိမှတ်ဖွယ် (ရာသီသွေးဆင်းမှု မှတ်တမ်းပြက္ခဒိန်)
သမီးလေးသိဖို့ ရာသီသွေးပေါ်ခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးစို့
Vitamin D: ဗီတာမင်ဒီ အာဟာရ
Hospital Statistics Report 2017-2018 (June 2020)
Publications, Reports, Presentations & Documents
` ` C, slider
Public Health Statistics 2017-2019 (22 Sep 2021)
` ` Report, P
COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကာကွယ်ရန် (14-7-2021)
` ` Health Info_People, COVID-19
Departments under MOH
1. Dept. of Public Health &
Dept. of Medical Services
2. Dept. of Human Resources for Health
3. Dept. of Medical Research
4. Dept. of Traditional Medicine
5. Dept. of Food and Drug Administration
ဆေးရုံ များနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများ
MOH Video Spots